ရေးတဲ့သူကိုက လူဆိုး ကိုး...
ဓါတုဗေဒ ဆိုးဆေး တွေပါ နေတယ်... ချောင်းဆိုး တော့ မယ်။ အဟွတ် -
ဆေးဆိုးထားတဲ့ ကဗျာလေးလည်း လှပါတယ်..
ဆိုးတဲ့ခေတ်မှာ ဆေးတွေဆိုးလိုက်တဲ့ ကဗျာတပုဒ်ပေါ့။
ခိုးတာကို ခိုးတယ်လို့ ပြောလို့မရပေမယ့်
အရဲကိုးပြီး ဒီကဗျာကိုလည်း ခိုးလိုက်တယ်…..
( ဟယ်…. ဘွာတေး…. ဘွာတေး…… ဒီတယောက်က မူပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လာရင် နည်းနည်းလေးမှ အထိခံတာမဟုတ်ဘူး… ယောင်လို့။း-)
ဘဲဒီး ဆောရီး ။ ပထမ မှတ်ချက်က ကော်ပီလုပ်ထားတဲ့ စာမှားဝင်သွားတာ ။ တကယ်မှတ်ချက်ရေးခြင်တာက [ဆိုး ဆိုတဲ့ ဘာသာစကားအသုံးအနုန်းကို အမျိုးမျိုးသုံးစွဲထားတာကို သေချာကြည့်သွားတယ် ။ ဘာသာစကားပေါ်မှာတည်ပြီးရေးတဲ့ ကဗျာတချို့ကို ဘာသာပြန်လို့မရဘူးလို့ ကျနော်ဖတ်ဖူးတယ် ။]
ကိုပေါ ဖြည့်စွက် ခိုးသွားတာလည်း ကြိုက်တယ်
ဆိုးတော့ဆိုးတယ် နွဲ့ဆိုးလေးတဲ့ :P
အတော်ဆိုးတဲ့ ကောင်မလေး ...
ကဗျာတောင် ဆေးဆိုးတယ် ...
တော်ပြီ ... မစားတော့ဘူး ..
အဲလေ .. မဖတ်တော့ဘူး ...
အသာလေး ခိုးပြီးပဲ ကြည့်တော့မယ် :P
ဟာ..ပန်ပန်လဲ ခေတ်မီသွားအောင် ကဗျာကို ဆေးဆိုးတယ် ဆိုပါလား။ ပြေးမှ..
အရောင်တွေစွန်းလို့ :) ကောင်းသောနေ့ပါဗျာ :)
ဆေးရောင်နဲ့ ဆိုးတာက အငြိမ်းချမ်းဆုံးလို့ ယူဆရတာပါပဲ...။
အဖြူထည်သက်သက်က လှပကြွရွပေမယ့် အစွန်းအထင်းမခံဘူးလေ။
ဆိုးနေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ ဆေးဆိုးတာတွေ ခေတ်စားလို့
ပန်ပန်တို့များ ခေတ်မှီအောင် ကဗျာတောင် အလွတ်မပေးပဲ ဆေးဆိုးလေသကိုး...
ဆိုးချင်သလောက်သာ ဆိုးလိုက်ပါတော့..း)
အရဲကိုးပြီး ဆေးဆိုးထားတဲ့ကဗျာက နီရဲနေသကိုးဗျ..
မပန်ရေ ကဗျာကိုဆေးဆိုးပြီးရင် ပန်းကောရိုက်ဦးမှာလားဗျ
ဆေးတွေက ဆိုးတာကို ခံခဲ့ကြရတာ...
ဟယ်… ဒီကဗျာဖတ်ပြီး မျက်လုံးမှာရော နှလုံးသားတွေပါ အရောင်တွေစွန်းသွားတယ်…
ပန်ရေ… ဘယ်ချွတ်ဆေးက ကောင်းသလဲဟင်….
တော်တော်ဆိုးတဲ့ ကဗျာပဲ။ ဆိုးမှကောင်းတဲ့ခေတ်ဆိုတော့လည်း ဆိုးကြရှာမပေါ့လေ။ ဆိုးလေစွ။ ဆိုးလေစွ။
သင်္ကြန်ကာလ နှုတ်ဆက်သွားပါတယ်။ ကျန်းမာကြပါစေ။
"... ရေးဖို့ဦးတည်တာတခြား ထွက်တာတလွဲ ဖြစ်နေတော့ ဘလော့ဂ်အတွက် ဖြစ်သွားတယ် ..."
အပယ်ခံ ထွက်ကုန်ကိုမှ ဘလော့ဂ်တင်ရသလားဗျ...း)
နေမကောင်းပါဘူးဆို ဇွတ်...သွား လူဇိုးး အယ်လေ လူဆိုး ကဗျာဆိုးက မဆိုးဘူးး)
ဆိုတာကို ဆိုတယ်လို့ ပြောလို့မရပေမယ့်
ဆိုဒါ တွေကြားထဲ ကိုယ်ယောင်ဖျောက်ဖို့